Marie र योएल मृत्यु बारे Aftonbladet | Apg29
"म आमा स्वर्गमा छ भन्न"
तस्वीर: Aftonbladet, शनिबार 27 डिसेम्बर 2008।
डिसेम्बर 27, 2008 Aftonbladet लेख Marie र योएल मृत्यु बारे। Marie र योएल पछि बस दिन 22 डिसेम्बर 2008 मा मृत्यु भएको थियो।
Marie को गर्भावस्था भर राम्रो लाग्यो, तर ठूलो स्वरमा हाल हप्तामा निद्रामा घुर्नु गर्न सुरु ठूलो पेट कारण थियो। त्यसैले त्यो सुत्थ्यौं र पतिको सामान्यतया Jönköping मा दुई-मंजिल्ला घरमा अलग कोठा मा, बस बच्चालाई लागि प्रतीक्षा गर्दै। डिसेम्बर 22 को यति पनि रात।
- म बसे र काम गरे। म कम्प्युटर मा धेरै लामो बसिरहेका छैन छु त मलाई, त्यो शौचालय मा थियो अर्को समय बताउन उनको आग्रह त त्यो ओछ्यानमा गए, त्यो भन्छन्।
बस मध्यरात अघि, Marie irummet आउनुभयो।
- यो त छिटो भयो। IAG एक कोठा मा उत्पत्ति थियो र तिनीहरूले योएल संग काम गरे। यो एक केटा थियो अघि मलाई ज्ञात थियो र हामी त्यो बोलाउन भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ पंपों र Hoses थिए, र तिनीहरूले उहाँलाई पुनर्जीवित, तर डाक्टर यसलाई राम्रो मूल्य छैन असंभव साँस थियो, व्याख्या, र ती कहाँ कुराहरू। उहाँले तिनीहरू दिइएको थियो, तर योएल बस्थे।
आफ्नो छोरा राख्न पायो
Christer उनको काखमा उनको छोरा थियो।
- तिनीहरू तिनीहरूले अनुहार उहाँलाई कटौती थियो भनी बाहिर प्राप्त गर्न सक्छ जब यस्तो हतारमा भएको थियो। उहाँले आफ्नो नाक र माथिल्लो ओठ मा कटौती थियो, तर उहाँले त राम्रो थियो। उहाँले मलाई छोटकरीमा देख्यो, र कर्मचारी हामीलाई फोटो खिंचवाने। चाँडै पछि, उहाँले मेरो काखमा मृत्यु, Christer भन्छन्।
र Christer - के Marie र योएल प्रहार डाक्टर रहस्य छ। आमा र छोरा अब Linköping शव परीक्षा पठाइएका छन्।
डाक्टर: दुःखद घटना को असामान्य प्रकार
परिवार Åberg प्रहार कि शोकमा अत्यधिक असामान्य छ।
- स्वीडेन मा 1,00,000 जन्मेका दुई र चार बीच कि आमा मर्छ भन्छन् Kaj Wedenberg, 54, obstetricians त गलत हो।
उहाँले यो Christer Åberg लागि लामो समय साँच्चै पत्नी Marie र नवजात शिशु छोरा योएल गर्न के भयो पत्ता लगाउन हुनेछ भनी टिप्पणी।
- के उनीहरूलाई एउटा शव परीक्षा बिना जवाफ असम्भव, र यो जस्तै एक मामला मा, यो पक्कै पनि धेरै हप्ता हुनेछ मारा, Malar अस्पताल गरेको gynecological क्लिनिक मा एक अपरेसन प्रबन्धकको रूपमा काम गर्ने डाक्टर, भन्नुभयो।
जीवनको बलियो स्पार्क
आमा गर्छ जब डु पनि मर्न भ्रूण?
डिसेम्बर 2020 मा यो 12 वर्ष मेरी श्रीमती र साना छोरा योएल मेरो काखमा मृत्यु हुँदा पहिले हुनेछ। योएल, आज बस्ने गरेका थिए, त्यसपछि 11 वर्ष भएको र 12 भर्न थियो डिसेम्बर 22, 2020 थियो।
समुद्री र योएल को अन्त्येष्टि।
म शोक तल बस्न छैन, तर यस्ता घटना कुनै पनि मानिस छोड्न सक्नुहुन्छ, र म जस्तै एक घटना कुनै पनि मानिस छोड्न हुनेछ भन्ने विश्वास छैन। यो जीवन भर सँगसँगै।
तथ्यलाई म हरेक दिन यसको बारेमा विचार छ। तर यो चोट छैन। यो सिर्फ त्यहाँ सबै मेरो मनमा समय छ।
जन्मदिन र मृत्यु दिन
डिसेम्बर 22 मा, Dessans हजुरबुबा, मेरी श्रीमती पिता वर्ष भरिन्छ। उहाँले आफ्नो छोरी र नाति मृत्यु यसरी जन्मदिन छ।
यसबाहेक उनको आमाको जन्मदिन मेरो पत्नी Marie जन्म र आफ्नो बुबाको जन्मदिन मा मृत्यु भयो। यो एकदम छक्कलाग्दो छ।
तिनीहरूले मेरो काखमा मृत्यु
साथै, म कहिल्यै मेरो पत्नी सुरक्षित थियो भने गरिएको मेरो शोक सामना गर्न सक्षम छन् भनेर लाग्छ। मलाई थाहा त्यो आज स्वर्गमा छ। यो मलाई सान्त्वना दिन्छ। अब म सपना दायाँ त्यो स्वर्गमा छ, तर म गरेको थियो भने पनि छैन, म सय एक अझै पनि गरिएको प्रतिशत त्यो स्वर्गमा पक्का हुनेछ सपना देख्यो छन्। त्यो आफ्नो जीवनमा प्रभु येशू नभएकोले।
एक प्रार्थना सँगै
केही दिन त्यो मृत्यु अघि, त्यसैले हामी सँगै प्रार्थना गरे। त्यो आग्रह गर्दा यस्तो अनौठो र सुन्दर वातावरण थियो किनभने म छक्क थियो। यसलाई हामी सँगै प्रार्थना अन्तिम समय थियो। वातावरण थियो यो एकदम राम्रो थियो। त्यो येशूको नाउँमा जीवित परमेश्वरको सम्पर्क भएको थियो।
योएल येशूले आज स्वर्गमा छ। उहाँले यसको लागि पनि युवा थियो किनभने उहाँले सुरक्षित गर्न सकिएन, तर उहाँले त उहाँले आज स्वर्गमा छ, किनभने उहाँले जन्म भएको थियो किनभने पाप थियो थिएन।
कहिलेकाहीं मलाई भयो कुरा यस प्रकारको कसरी ह्यान्डल गर्न, र म सामान्यतया "यो गर्दैन" भनेर जवाफ सोधे छु। त्यसपछि म जारी: "येशूले बिना, म यो गरेको कहिल्यै थियो लागि!"
तिनीहरूले प्रकोप सामना गर्दा येशूले छ नगर्ने मान्छे यदि लाजमर्दो छ। तिनीहरू जानेछन्?
म येशू भनेर खुसी छु, र उहाँले सबै समय मेरो साथ भएको छ!
शव परीक्षा रिपोर्टहरू
संयोगले म कोरोनर Henrik Druid Linköping मा Marie र योएल autopsied गर्ने मेरो पीसी शव परीक्षा रिपोर्ट फेला परेन। म 2009-02-14 लेखिएको रिपोर्ट केही अंशहरूको ल्याउन छौँ।
Maries शव परीक्षा अनुसार मृत्यु को कारण
प्रहरी रिपोर्ट र Marie Atkins गर्न छोटकरीमा देखाइएको Ryhov देखि समीक्षा चिकित्सा रेकर्ड संकुचन र 23 बजे, त्यो फिड त्यो पूरा भएको थियो बच्चा गणना जस्तै मितिमा गृह 081 222 मा निर्जीव हुन्छन्। paramedics आइपुगे सम्म पति CPR गरे। पनि Ryhov मा आपतकालीन सीजेरियन खण्ड गरेका गर्दा थप आगरणको प्रयासहरू लामो थियो। Marie जीवन सुरक्षित गर्न सकिएन। बाहिर ल्याए थियो कि बच्चा निर्जीव थियो र पुनर्जीवित हुन सकेन। Marie Atkins पहिल्यै एक बच्चा एक uncomplicated गर्भावस्था पछि जन्म देखि, एक अस्थानिक गर्भावस्था थियो थियो रद्द, र दुई वर्ष। चिकित्सा टिप्पणीहरू अन्तर्गत वर्तमान गर्भावस्था जटिलताहरू निःशुल्क। त्यो कुनै गम्भीर रोग ज्ञात थियो।
सर्वेक्षण निष्कर्ष र परिस्थिति मृत्यु प्राकृतिक रोग (आमा मा गर्भावस्था जटिलताहरू) को कारण छ, प्राकृतिक थियो भन्ने।
भाग मा Druid यस्तो लेख्छ: "बाहिर ल्याए थियो बच्चाले निर्जीव थियो र पुनर्जीवित गर्न सकिएन" तर योएल, बस्ने पनि माथि एक पटक हेरे तर असामान्य प्रेरणाबाट। केही घण्टामा, म त्यो पनि मेरो काखमा 22 डिसेम्बर बिहान चार साढे वरिपरि मृत्यु अघि मेरो काखमा एक प्रत्यक्ष योएल आयोजित।
V 03, tisdag 19 januari 2021 kl 06:24